African Black Oystercatcher - Iintaka - Mzantsi Afrika
Umhlali olinganiselwe kummandla wolwandle, isiqithi sogu, unxweme kunye neendawo zokuhlala.
Isikhalo Se Ntaka
I-alarm yomnxeba yinkqutyana yokubetha 'imisindo yepip pip pip' kwaye enye ikholi yinto ecacileyo ephindaphindiweyo 'klee-weep'.
Ixesha lokuzalisa liphuma ngo-Oktobha ukuya kuMatshi. Iqanda elilodwa ukuya kwezine libekwe emgodini omncinci onamabhakethi okanye ezinye iinqabileyo eziqhekekileyo. Amaqanda anemibala yamatye, iibhentshi ziyahlukahluka emfusa obomvu ukuya kumnyama. Ukunyuswa kweziyi-28 ukuya kwiintsuku eziyi-30. Iikhonkco azikwazi ukubhabha iintsuku eziyi-45 ubudala.
AmaJaji ayingqungquthela emnyama ebomvu kunye nemigca emhlophe kunye nemilenze eluhlaza-olunxwemeni.
Inkcazo yabantu abadala
I-Oystercatcher imnyama kakhulu ngemilenze ebomvu kunye ne-bill-tipped ebomvu. I-bill like, eyinto encinane kune-intloko, i-mandibles ayihlanganisani kwintonga kwaye idibene, amacandelwana acinezelekileyo ukuze enze amaqabunga amancinci kwinqonga; Imilenze emfutshane, kunye nezontwane ezintathu kuphela. Amehlo abomvu azungezwe i-orange.
Umhlali oqhelekileyo kodwa ukhangeleka esichengeni
I-African Black Oystercatcher isasazwa ngokubanzi ngaselunxwemeni lwase-Afrika, kodwa ngokukhawuleza kwiindawo. Ukubonwa kwiindawo ezisematyeni kunye namabhankeni kunye namatye kunye neendawo zokuhlala.
I-African Black Oystercatcher ithathwa njengezilwanyana ezinobungozi, nangona kunjalo ngokuqhelekileyo kummandla wonxweme waseMzantsi Afrika kunye neNamibia. Esinye sezizathu eziphambili zezi zinto kukuba izidleki zabaqhubi bee-ostercatchers ziphazamiseka ngumsebenzi wabantu.